Ndeipi iyo inotaura zvakanaka SEO tsanangudzo, tichifunga nezve Search Engine Marketing?
Ndinogona kazhinji kunzwa manzwiro asinganzwisisiki kubva kune vatungamiri vemabhizimisi vazhinji uye kunyange kubudirira, vakangwara uye vakachenjera vatungamiri. Vose vari kunyunyuta nezvekuvhiringidzwa nemashoko ekutsvaga Search Engine Marketing (SEM) uye zvakakwana SEO tsanangudzo. Izvozvi, maonero ose akare uye saka anowanzotaurirana zvakasiyana-siyana nevashandi vebazi. Ngatitarisei - vazhinji vavo vari kure kwazvo kuva vakarurama zvechokwadi, kungounza kuwandisa kwakawanda pane.
Ngatitei zvinhu zvakajeka pakupedzisira. Hungu, Search Engine Optimization (SEO) uye Search Engine Marketing (SEM) inonyatsotarirwa kutsvaga injini. Asi ivo vari kuzviita nenzira mbiri dzakasiyana, kunyanya kushandisa mazwi maviri akasiyana. Ndiri kureva, Kutengesa nekugadzirisa zvakagadziriswa zvakajeka uye zvakajeka, kwete kureva zvavanoshandisa zvachose. Ndinokurudzira kutarisa muchidimbu chinyorwa chakanyanyosiyana pakati pavo, kuwana ruzivo rwakakodzera rweSEM, rakapedzwa zvizere nejekesheni yeSEO yakajeka.
Ngatitii tifananidze zvisina kufanira kuona musiyano panguva imwe chete. Fungidzira kuti Digital Marketing yako imotokari. Kuti ushande zvakanaka, motokari yako inofanira kuchengetedza zvakanaka injini yayo, maererano nekuchengetedza, somuenzaniso, kugovera kwemafuta. Kutora izvi zvingave-zvifananidzi sekutanga, tinogona kuenderera mberi nekuenzanisa. Hongu, kuenzanisa kwangu kushinga kwakajeka kubva pane zvakanyatsocherechedza, asi ivo vanofanira kuita, kunyanya iye zvino.
Kugadzirisa injini yekugadzirisa kunogona kuenzaniswa nekutora Engine Engine Optimization. Inobatanidza zvinhu zvakasiyana-siyana, zvakadai sekutarisa kudzvinyirira, mafuta, maji emvura, uyewo zvinosanganisira mamwe mabasa akasiyana-siyana kuchengetedza motokari kushanda. Kuti uite zviri nani, iwe unogona kugara uchiwana zvimwe zvikamu, kana kutsiva zviripo zvitsva. Kuita kudaro, iwe uchazadzisa hutano hunobudirira hwezuva nezuva. Izvi ndizvo zvandiri kutenda kuti SEO iri nyore kunzwisisa ndeye. Kuti tiite chifananidziro ichi kunyatsogutsa, tinogona kuzvienzanisa nyore nyore nechinzvimbo ichi chisingafadzi chemotokari pfuma inovengwa nevechirwere chevatya, ndichabvuma.
Kune rumwe rutivi, Search Engine Marketing inogona kufananidzwa nekudzivirirwa uye kusinganzwisisi kudiwa kuisa gasi idzva mumotokari yemotokari yako. Kutora zvinyorwa zvekare zvakakosha zvakagadziriswa mabasa ekushandurwa kweSOO zvisiri nyore, zvinova pachena kuti zvese chero zvipi zvese zvinotsigira nekugadzirisa zvingave zvichida kuderedzwa kune rimwe dhigirii. Kuita izvi (e. g. , kushandisa webhusaiti yako chete nechokupedzisira kweEO effort), iwe uchakwanisa kutsanangura yakawanda yezvakakura zvekubhadhara kwenguva refu, asi zvichengetedze motokari yako inoshanda, zvichida padanho rezasi. Kuzadza mafuta kweSIMM, kune rumwe rutivi, kuchiri kukosha, saka uchasiiwa nzira chete yekushandisa nayo motokari yako, kutyaira nzira yako kwaunoda uye kana uchida kwenguva yose.
Zvose SEO neSEM dziri kushanda mumunda mumwechete. Ndinoreva kureva vamwe vashanyi panzvimbo yako yepaIndaneti. Nokuda kwechokwadi SEO tsanangudzo, kushanda zvakanaka uye yakachengetwa webhusaiti yebhizimusi ichakuunza huwandu hwehuwandu hwehupenyu. Inguva yakareba uye inoshingairira kushandiswa, iyo inosimbisa kutsika kwako kwakasimba kwevatengi chaivo, uye naizvozvo mari. SEM kutengesa pakutsvaga kubhadhara, kune rumwe rutivi, nguva dzose inoda kudyiwa nemari. Iyo inotungamirira kufamba kwako pakarepo, nokudaro kuratidza mhinduro pakarepo, asi munzira yayo Source .